Kungani Kufanele Uzikhiphe ohlwini Namuhla | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Mashi 5, 2010 NgoLwesihlanu, ngoJuni 19, i-2015 Douglas Karr
Usuku ngalunye, Martech Zone ithumela i-imeyili nge-CircuPress eguqula ngokuzenzakalela okuphakelayo kwebhulogi ibe i-imeyili ye-HTML efomethwe kahle. Kunabantu abangamakhulu ambalwa kuphela abasizakala ngayo - ingxenyana yokufundwa kwale bhulogi nsuku zonke. Kulungile… kuyisimo futhi sondla labo abakufunayo. Angizami ukukhulisa uhlu ngokungeyena, lunokugcinwa okukhulu futhi luyabakhohlisa labo abafuna ibhulogi yami ebhokisini labo lokungenayo.
I-imeyili yisiteshi sokumaketha oku-push. Ngingummeli omkhulu wokumakethwa kwe-imeyili okusekelwe ngemvume kepha ngikholelwa ukuthi iningi lezinkampani zisebenzisa i-imeyili ngokungaphumeleli.
Abathengisi be-imeyili abalinganisi eyabo ukugcinwa kohlu lwe-imeyili, banaka kuphela ukuthi bangaki abasohlwini nganoma yisiphi isikhathi esisodwa. Ukutholwa kohlu lwakho kungadlula ukugcinwa kwakho. Uma uthola ukungabhalisi okuningi, udinga ukulungisa okuthile ngaphambi kwesikhathi.
Abathengisi be-imeyili bakholelwa lokho ngendlela emangalisayo amazinga aphansi avulekile nokuguqulwa zinhle uma zingaphezu kwemboni izilinganiso. Bantu, isilinganiso esingu-4% sokuchofoza nge-imeyili yisilinganiso sokuhluleka esingu-96% futhi akuyona into yokugubha.
Abathengisi be-imeyili bavame ukuba ne- ikhalenda lokho kudinga ukuthi bashicilele, kungakhathalekile ukuthi okuqukethwe kubi noma cha. Ngithola ama-imeyili ebhokisini lemilayezo engenayo njalo ngesonto futhi ngicabanga ukuthi le nkampani icabange kanjani ukuthi kunokuthile okuthakazelisa ngokwanele ukukuthumela.
Abathengisi be-imeyili bakholelwa ku imeyili izibalo: Uma abantu abangu-10 bethengwe ohlwini lwami lwe-1,000 ku-imeyili yami yamasonto onke, ngingakuthengisa kabili ngama-imeyili ama-2 ngesonto. Kufana nokuphrinta imali. Cha akunjalo. Ama-imeyili amaningi entula angahle anikeze ukwanda kokuthengisa, kepha ekugcineni uzolahlekelwa ababhalisile ababalulekile.
Nakuba izindleko zokumaketha nge-imeyili kwehla, kusadla izinkampani isikhathi esiningi nemali ethile ukuthumela i-imeyili. Angikaze ngizame ukuphusha i-imeyili yami noma ngiyigqokise ngoba angiqiniseki ukuthi izokwenza kahle ngabafundi. Mhlawumbe uma ngingaba nokuqukethwe okuzinikele ku-imeyili engezansi komgwaqo - kepha angizukuthumela ama-imeyili angama-crappy ngenhloso yokuzama ukuthola ama-eyeballs ambalwa.
Into engcono kakhulu ongayenzela inkampani ethumela i-imeyili e-crappy ukwenza lokho zikhiphe ohlwini. Ungalindi ukuthi i-imeyili ibe ngcono - bathumele umlayezo namuhla. Hlanza ibhokisi lakho lokungenayo.
Tags: isetyhulauhlu lwababhalisile be-imeyiliababhalisile nge-imeyiliuhlu lwababhalisilezikhiphe ohlwini
Ukushicilelwa Kwangempela Nokusesha